लमही, उत्पादन भएको तरकारीले बजार नपाउँदा लमहीका किसान चिन्तित छन् । तरकारीले उचित बजार र मूल्य नपाउँदा उत्पादन भएका तरकारी सस्तोमा बेच्न उनीहरू बाध्य छन् ।
प्रकाशित : शुक्रबार, असोज २६, २०७५१५:१३
आफ्नो प्रेमी निक भेट्न यति महँगो कपडा लगाएर गईन् प्रियंका ! मूल्य सुन्दा सबै चकित परे !
पढाईप्रति बालबालिकालाई आकर्षित गर्न शिशु कक्षामा खाजा !
नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ नियम ! वैदेशिक रोजगारीका जानेले अब २०० डलर मात्रै लैजान पाउने !
तोकिएको समयबाहेक गुडाएको भेटिए कारबाही हुने